Homeबिबिधघरमा श्रीमती हुँदा-हुँदै प रस्त्रीलाई श्रीमती भन्न सक्ने केटाहरु प्रती घृ णा लाग्छ !
सिम्रन भट्ट ।
मैले केहि सोच्न सकिन । एक छिन टोलाएर मैले भने दाईलाई के काम ? ब्युटिसियन सिक ? मैले भने कसले सिकाउछ । दाईले मज्जाले हासेर भन्नु भयो ” धत !लाटी,पैसा दिएर सिक्नु पर्छ भन्नु भयो । मैले हुन्छ भने त्यसपछि दाईले मलाई ब्युटिसियन क्लाससम्म लिनु भयो। मैले सिक्न सुरु गरे । दाईकै साथले मैले ब्युटिसियन सिक्ने अवसर पाएकी मैले केहि आगाडी बधिसकेकी थिए म । यो सिकिसके पछी मलाई अफर आयो ।
हुन् त् कसैले पनि सोच्दैनन् अरुको भलाईको लागि । न मैले सोचेको हुन्छु त् अरु कसैले । बिचरा ! गरिब हुन् पाउनु अर्को कुरा हो तर गरिब बाच्न पाउनु त् उसको अधिकारको कुरा हो । एक छाक खान र एकसरो लगाउन पाए रमाउने हामीलाई ढुक्क छ । आन्नदले निन्द्रा त् लाग्छ धनि भएर जति समाजको लागि देखाएका छन् ताकी अरुलाई देखाएका छन् तर सुत्दा आनन्दले कहिले सुत्दैनन सिल्पीङ ट्याबलेट खानु पर्छ बिचरा त्यो धनि भए पछिको नर्गको जिबन ।
कतिपयले त झनै काम गर्ने ठाउ‘ समेत नपाएर नारकीय जीवन बिताउन र खाली हात घर फर्किनेबाहेक अरु केही पनि गर्न सकेका छैनन् । मतभेद हैन,राजनीति खोल ओडेर बादसाह बन्न खोज्ने होइन । समान व्यवहारको भावना सृजना नगर्नु नै देश र समाजको लागि बेइमानी हो। यस्तै तानाशाही र बदमासीले आउने पुस्ताले के सिक्ने र के दिने ?-दियो अनलाइनबाट